Tady vaovao 24 ho an'ny Apple Watch, lohataona ho an'ny Apple dia eto | Avy amin'ny mac aho
Tady vaovao 24 ho an'ny Apple Watch, lohataona ho an'i Apple no eto
Ary ilay orinasa vao nanambara ny fandefasana andiana fehin-kibo vaovao ho an'ireo rehetra te-ho lamaody na hanambatra ireo fehy amin'ny fotoana misy azy ireo. Efa fantatsika fa ny tadin'ny Apple dia tena mora apetraka ary izany no mahatonga an'i Apple manana katalaogy be dia be toy izany, mba hahafahanao manohy mampifangaro ilay tadiny amin'ny fiofanana, akanjo na izay tianao.
Ity orinasan-tsakafo amin'ny endrika fehin-kibo vaovao ity dia tena tsara ho an'ny Apple sy ho an'ireo mpanamboatra antoko fahatelo, satria tena tsara tokoa ny tolotra raha raisintsika ny loko, modely, endrika ary fitaovana mihitsy aza. Vitsy ny mpampiasa Apple Watch tsy manana tadim-pitaovana roa na maromaro hanambatra, ary mitombo hatrany izany. mandra-manapa-kevitra ny hanova ny famolavolana famantaranandro i Apple, zavatra iray izay toa lavitra be izao ...
Saingy hifantoka amin'ireo modely vaovao natolotra androany tolakandro isika. Ireo dia maodely maromaro izay manambatra loko sy fitaovana toy ny Nylon nirandrana, fehin-kibo Sport, maodely izay misy kofehy sy ireo fehy mahazatra an'ny marika lamaody fanta-daza, Hermès.
1 Modely sy loko vaovao an'ny tarika ho an'ny Apple Watch
Modely sy loko vaovao an'ny tarika ho an'ny Apple Watch
Azavao fa amin'izao fotoana izao dia tsy misy izy ireo fa ny orinasa dia manamafy amin'ny fomba ofisialy fa ho tonga amin'ny faran'ity volana ity any amin'ny magazay amin'ny firenena isan-karazany eran'izao tontolo izao izy ireo, ary eny, Espana dia anisan'ireo firenena azo vidiana ireo fehy ireo. Andao hojerentsika ny lisitra miaraka amin'ireo maodely vaovao misy:
Sport Band in Denim Blue, Lemon Yellow and Raspberry Red
Kavina vita amin'ny kofehy vita amin'ny kofehy nolokoana mainty, manga mena, miloko volomparasy ary miloko mavokely
Loopan'ny fanatanjahantena amin'ny Yellow Lime, Pink Pink, Green Green ary Lagoon Blue
Tady kofehy klasika amin'ny Yellow Spring, Electric Electric ary Pink Pale
Nike Sport Band in Light Pink / Pearl Pink, Black / White ary Army Khaki / Black
Nike Sport Loop amin'ny Black / Pure Platinum, Bright Crimson / Black, Army Khaki, Midnight Mist ary Pearl Pink
38mm Double Tour Indigo Case Strap miaraka amin'i Rouge H Rim sy Loop
38mm Double Tour Case Strap ao Blanc miaraka amin'i Rouge H Rim sy Tribal
42mm Indigo Simple Tour Rallye Case Strap miaraka amin'i Rouge H Rim sy Loop
42mm Tsotra Tour Rallye Case Strap ao Blanc miaraka amin'ny fetra Rouge H sy loop
Ny Sport, Sport Loop ary ny Braided Nylon Straps dia sarany 49 dolara any Etazonia sy ireo izay manana dolara 149 dolara, Ka ny vidiny dia hitovy tanteraka amin'ny ananantsika amin'izao fehy ireto. Iza amin'izy ireo no tianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple products » Apple Watch » Tady vaovao 24 ho an'ny Apple Watch, lohataona ho an'i Apple no eto
Podcast 9x26: Amin'ny farany dia manana hetsika isika amin'ny volana martsa